China ABS nebwe jekiseni Kuumbwa Manufacturer uye mutengesi | Mestech
Plastic nebwe jekiseni Kuumbwa
ABS nebwe (acrylonitrile butadiene styrene) ndiyo inonyanya kushandiswa polymer, uye ABS nebwe jekiseni Kuumbwa ndiko kwakanyanya.
Mestech ine ruzivo rwakakura muABS jekiseni kuumbwa. Yedu ABS nebwe jekiseni Kuumbwa sevhisi inogadzira zvinhu zvinoshandiswa mumaindasitiri akasiyana siyana uye kune akasiyana mafomu. Yedu-ye-iyo-iyo-michina michina inokurumidza kutora basa rako kubva pakutanga kusvika pakupedzisira nemhedzisiro yemhedzisiro. Plastiki ABS resin (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) ndiyo inonyanya kushandiswa polymer. ABS inonyatso kuzivikanwa yeayo akanaka ehupfumi eiyero kugadzikana, kubwinya, kuumbika uye kwepamusoro kurapwa Injecton Kuumbwa ndiko kunonyanya kugadzirisa kugadzira ABS zvigadzirwa.Zvinhu Zvokunyama Pfuma yeABS resin: Kunonyanyisa Kupisa: 176 ° F 80 ° C Minimum Tembiricha: -4 ° F -20 ° C Autoclave Inogoneka: Hapana Melting Point: 221 ° F 105 ° C Tensile Simba: 4,300psi Kuoma: R110 UV Kuramba: Rakaipa Ruvara: Translucent Yakananga Kukomba : 1.04 ABS nebwe jekiseni Kuumbwa Zvakanakira1.Good emagetsi zvivakwa 2.Impact kuramba 3.Excellent kemikari kuramba, kunyanya kune akawanda akaomarara acids, glycerine, alkalis, akawanda mahydrocarbon uye doro, inorganic munyu. Inobatanidza simba, kuomarara uye kuomarara mune chimwe chinhu 5.Excellent mutoro kugadzikana 6. Lightweight 7.Processing ndeiya yakaita kugadzikana uye pamusoro gloss zvakanaka, zviri nyore kupenda, kuchovha, kunogona zvakare kumwayiwa simbi, electroplating, kutenderera uye kubatana uye imwe yechipiri kugadzirisa kuita. 8. ABS inogona kuitwa mumarudzi akasiyana-siyana sezvinodiwa. Kana wedzera murazvo retardant chirungiso kana Anti-ultraviolet chirungiso kuna ABS, rinogona kushandiswa kubereka zvinoriumba zvekunze mano kana yakakwirira tembiricha nharaunda.
Kushandiswa epurasitiki ABS nebweABS ine tsoka yayo mumhando dzakasiyana siyana dzekushandisa nekuda kwekuita kwayo kwakanaka kuita uye kugona kuita maitiro. Huru zvirimo zvinotevera: 1. Mota Indasitiri Zvikamu zvakawanda muindasitiri yemotokari zvinogadzirwa neABS kana ABS alloys. Semuenzaniso: mota dhibhodhi, yemukati yekunze pani, yemukati yekushongedza pani, mudhiraivho, kurira kuputira pani, musuwo kukiya, bhamba, kufefetera pombi uye zvimwe zvakawanda zvikamu ABS inoshandiswa zvakanyanya mukushongedzwa kwemukati kwemotokari, senge girovhosi bhokisi uye sundry bhokisi gungano Yakagadzirwa nekupisa-isingagadzirwe ABS, masuo ekumusoro ekumusoro uye ezasi zvishongedzo, mvura tangi chifukidzo chakagadzirwa neABS, uye zvimwe zvakawanda zvikamu zvakagadzirwa neABS sezvinhu zvakagadzirwa. Huwandu hwezvikamu zveABS zvinoshandiswa mumotokari anenge gumi makirogiramu. Pakati peimwe mota, huwandu hwezvikamu zveABS zvinoshandiswa zvakare zvinoshamisa. Izvo zvikamu zvikuru zvemotokari zvakagadzirwa neABS, senge dashibhodhi nePC / ABS semasaga, uye iyo yepamusoro inogadzirwa nePVC / ABS / BOVC firimu. 2. ZveMagetsi neMagetsi Midziyo ABS iri nyore kujekeswa mugobvu uye zvikamu chaizvo zvine chimiro chakaomarara, saizi yakatsiga uye chitarisiko chakanaka. Naizvozvo, ABS inoshandiswa zvakanyanya mumidziyo yemumba nemidziyo midiki, senge maTV seti, marekodhi, mafiriji, mafiriji, michina yekuwachisa, maacon conditioner, machina ekutsvaira, michina yekumba fax, odhiyo neVCD. ABS inoshandiswawo zvakanyanya mukutsvaira uye zvikamu zvakagadzirwa neABS zvinoshandiswa zvakare mumidziyo yekicheni. ABS jekiseni zvigadzirwa zvigadzirwa zvinopfuura 88% yeiyo yakazara epurasitiki zvigadzirwa zvemafriji. 3. Hofisi Zvishandiso Nekuti ABS ine yakakwira gloss uye nyore kuumbwa, hofisi michina uye michina inoda yakanaka chitarisiko uye yakanaka mubato, senge mbozhanhare kesi, ndangariro kesi, komputa, fakisi muchina uye duplicator, ABS zvikamu zvinoshandiswa zvakanyanya. 4.Industrial Equipment Nekuti ABS ine yakanaka kuumbwa, zvinobatsira kugadzira michina chassis uye shell ine hombe saizi, diki deformation uye yakagadzikana saizi. Zvakadai sekushanda kwedhibhodhi, tafura yekushanda, dziva remvura, zvikamu bhokisi, nezvimwe.
Zvigadzirwa uye kuumbwa dhizaini
1. Ukobvu hwemadziro hwezvigadzirwa: Ukobvu hwemadziro hwezvigadzirwa hwakabatana nehurefu hwekunyungudika kuyerera, kugona kwekugadzira uye zvinoshandiswa zvinoshandiswa. Chiyero chehurefu hwekuyerera kweABS hunonyungudika kusvika pakukora kwemadziro kwechigadzirwa iri pamusoro pe190: 1, iyo inosiyana zvichienderana negiredhi. Naizvozvo, ukobvu hworusvingo rwezvigadzirwa zveABS hazvifanirwe kuve zvakatetepa. Kune zvigadzirwa zvinoda kurapwa kweelectroplating, ukobvu hwemadziro hunofanirwa kuve hwakanyanya kuita mukobvu kuti uwedzere kunamatira pakati pekupfeka uye pamusoro pechigadzirwa. Nechikonzero ichi, ukobvu hwemadziro hwechigadzirwa hunofanira kusarudzwa pakati pe1.5 ne4,5 mm. Tichifunga nezve ukobvu hwerusvingo rwezvigadzirwa, isu tinofanirwa zvakare kutarisisa kuenzana kweiyo ukobvu hwemadziro, kwete musiyano wakakura kwazvo. Kune zvigadzirwa zvinofanirwa kuve zvakagadzirwa nemagetsi, iyo yepamusoro inofanira kunge yakati sandara uye isiri-convex, nekuti zvikamu izvi zviri nyore kutevedzera guruva nekuda kwemagetsi, zvichikonzera kusimba kwekupfeka. Uye zvakare, kuvapo kwemakona akapinza kunofanirwa kudzivirirwa kuitira kudzivirira kunetseka. Naizvozvo, zvakakodzera kuti riitise arc shanduko pamakona anotendeuka, majoini ejobvu uye zvimwe zvikamu.
2.Demoulding materu: The demoulding materu zvigadzirwa zvakabatana zvakananga ayo shrinkage. Nekuda kwemakero akasiyana, akasiyana maumbirwo ezvigadzirwa uye akasiyana mamiriro ekuumba, iyo shrinkage yekuumba ine misiyano, kazhinji mu0.3%, dzimwe nguva inosvika ku0.4 0.8%. Naizvozvo, iko iko iko kweyekuyera kukura kwezvigadzirwa kwakakwirira. For ABS zvigadzirwa, ari demoulding materu kunofungidzirwa seinotevera: chinoumba chikamu ndiwo madhigirii 31 pamwe demoulding mirayiridzo, uye mhango chikamu 1 dhigirii 20'pamwe demoulding mirayiridzo. Kune zvigadzirwa zvine chimiro chakaomarara kana netsamba uye mapatani, iwo materu ekuparadza anofanira kuwedzerwa nenzira kwayo.
3. zvinodiwa zvekubvisa: nekuti zvinoonekwa kupera kwechigadzirwa zvine hunyanzvi pakushanda kwe electroplating, kuoneka kwemavara madiki ese kuchave kuri pachena mushure mekugadzirwa kwemagetsi, nekudaro mukuwedzera kuchinodiwa chekuti hapana mavanga aripo mudumbu, iyo inoshanda nzvimbo yekuburitsa inofanirwa kuve yakakura, kuwiriranisa kwekushandiswa kwevakawanda ejectors muiyo ejection maitiro inofanirwa kuve yakanaka, uye iyo ejection simba inofanirwa kuve yunifomu.
4. Kununura: Kuti udzivise kupera kwakashata panguva yekuzadza, pisa iyo yakanyungudika uye yakajeka mitsara yemisono, inofanirwa kuvhura vent kana vent slot ine yakadzika isingasviki 0.04 mm kuti igadzirise kuburitswa kwegasi kubva inyauka inch. 5. Mumhanyi negedhi: Kuti iite kuti ABS inyunguduke izadze mativi ese emhango nekukasira, dhayamita yemumhanyi haifanire kunge iri pasi pe5 mm, ukobvu hwegedhi hunofanirwa kunge huri pamusoro pe30% yehuremu zvechigadzirwa, uye kureba kwechikamu chakatwasuka (kureva chikamu chinopinda muvhu) chinofanira kunge chingangoita 1 mm. Iko kumira kwegedhi kunofanirwa kutemerwa zvinoenderana nezvinodiwa zvechigadzirwa uye nongedzo yekuyerera kwezvinhu. Ramp haibvumidzwe kuvapo pane yekumhara pamusoro pezvigadzirwa zvinofanirwa kusarudzwa nemagetsi.
Surface kurapwa uye kushongedzwaABS iri nyore kupendwa uye kuvezwa. Inogona zvakare kumwayiwa nesimbi uye electroplating. Naizvozvo, zvikamu zveABS zvinowanzo shongedzwa uye zvinodzivirirwa nekupenda jekiseni kuumba uye kupuruzira, kudhinda sirika, electroplating uye kupisa kutsika pamusoro pezvikamu zvekuumba. 1. ABS ine yakanaka jekiseni hunhu, uye inogona kuwana akasiyana mamakisi ezviyo, mhute, inotsvedza uye girazi pamusoro kuburikidza nefa. 2. ABS ine huni hwakanaka hwehukama, uye zviri nyore kuwana akasiyana siyana mavara ane pevhu nekumwaya. Uye skrini yekudhinda akasiyana mavara uye mapatani. 3. ABS ine yakanaka electrochemical yakanamirwa pamadziro hunhu uye ndiyo chete mapurasitiki ayo anogona nyore kuwana simbi pamusoro ne electroless yakanamirwa pamifananidzo. Maitiro emagetsi ekuisa emagetsi anosanganisira emagetsi emhangura, emagetsi nickel yakanamirwa pamadziro, sirivheri isina magetsi isina magetsi uye isina chromium yakanamirwa pamoto.
Pashure: China OEM Die Kukanda Zvigadzirwa Zvinyorwa - CNC machine - Mestech
Zvadaro: Zvigadzirwa zvinoungana
Automobile bhamba uye jekiseni kuumbwa